Shirka xisbiga oo Laysugu Awood sheegtay iyo ONLF oo seeftu dul saaran tahay. – Xeernews24
30. Dezember 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Mustafa xisbiga Anagaa ku soo darnay !!” sidaas waxa shirkii xisbiga kayidhii isagoon Hadalka Leex Leexin Gudoomiye Axmed Shide oo cadaynaya inay Talada deegaanku Gacantiisa kujirta, Mustafana yahay uun shakhsi isagoo dibad Joog ah ay Keen-sadeen duruufo Jiray Awgood.
Shalay mar aan dawaday daah furka shirka Xisbiga oo Jigjiga ka dhacay waxa iiga soo baxay dhowr arimood oo la rabo in si dagan loo dhuuxo. Duulaan soo socda oo dib inoogu celin kara 1994 ayaan ka dareemey.
Shirku waxa u imanayaa xili arimo xasaasi ah ka socdaan deegaan iyo Geyiga Geeska Afirca (Maqaal aan illaa beri ku soo saaridoono Wardheenews ayaa ka hadlidoona mawduuca balaadhan ee isdhexgalga Horn of Africa).
Itoobiya oo si buuxda uga muuqata daagaal-beeleed ka socda gudaha Soomaaliya oy waliba dhex dabaalanaysa ayaan shalay ku waa bariisanay. Waxa intaas dheer askar maxaabiix ah iyo mayd Itoobiyaan ah in baraha bulshada la soo dhigay. Meles 2006 December ayuu si buuxda u galay Soomaaliya isagoo xiligaas taageero kahelay 100% xildhibaanada Soomaaleda we Barlamanka Itobiya ku jirtay.
Haweynada Canab la yidhaah oo AU Dr. Cabdul Majiid Xusseen Bare qabay oo kaliya ayaa cod diidin ah ku codaysay. Weli kuwan hada ee dawlada Abiy in ay si buuxda u galayaan iyo inkale waan fiirin doonaa.
Deegaanka waxa ka socoda wax u eg dagaal isir ku salaysan oo Soomaali, gaar ahaan kuwa Itoobiya guumaysato, lagu la jiro. Sida ONLF u dhigtay, dhul boob aan sharci ahayn ayaa Soomaalida lagu la jiraa, dawlda federalkuna wey ogtahay mase rabto in ay joojiso.
Dowlad deeganka Soomaalida, gaar ahaan MW Mustafa, in la adeegsanayo ayey u egtahay. Jabka weyn ee Soomaalida lagu hayo waa AAMUSNAATA iyo XAGLINTA dhinaca Oromoda ee dawlada Mustafe Cumar laga arkayo. Waa arimo aad Soomaali oo dhan uga yaabiyey.
Intaas waxa weheliya dhalinta Jaamcada Jigjijga dhigata oo Mustafa Cagajar ku hoorisay markii uu isku dayey in uu ku sifeeyo Soomaalidu in Itoobiyaan tahay; dhalintu waxay yidhaahdeen Soomaali ayaanu nahay oo Itoobiyaan manihin. Waxay warinayeen in gumaysi lagu qabsaday Taariikh ahaana iyagaa saxsan.
Kala duwanaansho falsafadeed ayaa halkaas ka muuqata. Sideedaba Mustafa Itoobiyaanimadiisa iyo tanuu Cabdi Cumar aaminsanaa faraq u ma dhexeeyo. Waxa kaliya ee u dhexeeya midna TPLF ayuu gacan saar la lahaa, kan kalena OPDO oo hada seef wadata ayuu massalaha hoos dhigtay.
Arimahaas iyo ku wa kale ayaa waxay keenayaan in dawlad deegaanka Soomaalidu mid uun u adeegto: Somalinimo daacad ah mise danaha guud ee Addis Ababa oo kow ah isla markaana afdhabaandhow Soomlinimo la tuso laakiin hoosta laga durayo.
Ilama aha in huuhaada Jigjiga mararka qaarkood kaga dhawajiso ee ku aadan Soomaalinimada oo ah Soomaaliweyn ayaanu jecelnahay laga siisanayo. Difaaca dadka ayaa kow ka ah Soomaalinimo. Arintaasna Mustafa wuu ku hungoobay sida uu isku daba qaban lahaana Allahu Yaclam! Siyaasadu haday sibibixo kaaga bilaabmato daba qabashadeedu wey adag tahay.
Dadweynaha Soomaalida ee u ku hoos jira xukunka Itobiya waxay badi ahaantood aaminsanyihiin in Mustafa la keentay oo Oromo keenatay. Waxbaa ka jira, laakiin shu’aashu waxay tahya, sidaan BBC ka sheegay, nin waxaan ka xorooba ma noqon karaa? (Can he be his own man?)
Arab Moi oo Kenya mudo dheer madexweyne ka ahaa waa la keentay, si dhaqso ahna waxa uu u xuubsiibtay in shaqsiyadiisa soo ifbixiyo. Tolow Mustafa Arab Moi ma noqondoonaa mise Cabdi Cumar oo hadal qurux badan ayuu noqon doonaa? Wakhtiga sheeg doona, hadase CMC ayuu aad ugh egyahay.
Godoomiya Axmed Shida, oo runtii aad moodo in uu rug cadaa yahay marka laga fiiriyo xaga siyaasada Itoobiya, ayaa shalay markuu ka hadlayey shirka arin yar duray: “Mustafa xisbigaa anagaa kusoo darnay” ayuu yidhii.
Waa hadal sarbeeb ah oo laakiin hadana qani ah. Af-Xabashiga uu Godoomiye Shidr aad u yaqaan ayaa waxa uu ku caan yanay waxa la yidhaa Sam iyo Worki (Xunbo iyo Dahaba). Hadalka Godoomiyihu yidhii xumbadiisu waa “xisbiga anagaa ku soo Darnay.”
Dahabaka ama nuxurka hadalkuse waa “Mustafa isagoon waxba ahayn oon siyaasada meelana kaga jirin ayaanu (hadaanunu nahay xoogaga Addis fadhiya oo Dawalda dhexe u horeyso) keenay Mustafana waa in uu noo hogaansamaa.
Hadaan shirka u soo noqdo, jawigu waxa uu ahaa nidaam lagu yaqaan kalidii talis iyo waxa uu MW Musefeniga Yuganda u bixiyey One-dominant party rule, ama hal xisbi oo awooda oo dhani ku soo hoyato.
Dadka Meesha fadhiyey ma ahyn xisbi dad ku jira ee wexay ahaayeen hawl wadeenada Dawlada oo lagu amrayo in ay jidka toosan qaataan, tababarna loo furi doono.
Xisbigu waxa uu istimaalayey qolka shirka dawlada, idaacadaha dawlda, gaadiidka dawlada, tigidhada dawlada, hoteelo dawladu bixinayso, saacada meesh la fadhiyey waxaa kharjiga qabay dawlada. Dawlada iyo xisbigu in ay mid ahaayeen ayaa kobtaas la’inugu tusay.
Hadaad si kale u dhigto, dawladu waa xisbiga xisbuguna waa dawlada: “The king is the state and the state is the King” waa wixii la odhan jiray. Waa ayaan daro haday da’yarteenii sidaas ku ababeen! War ma Ruush iyo Germanidii hore ayaa loo ekaaday? War ma TPLF ayaan ku badalanay Oromo oo EPRDF hogaan ka ah laakiin nuxurka dawligu aan wax badan laga badalin? Weli la isma gaadhin.
Intaas waxa ka daran fariinta weyn ee ku qarsoonay: Dagaal aan la cayimin ayaa lagu soo wadaa ONLF. Qudbada Mustafa waxay ani ixasuusisay shir Jigjiga lagu qabtay 1994. Waxaa qabtay shirkaas xisbiga awooda Meles xiligaas u dhiibay. Hanjabaad ayaa loo soo jeediyey ONLF; in ay qabiilista yihiin; in aanay Soomaali matilin; in ay Jigjiga dheeraad ku yihiin iyo wax la mid ah. Wakhti aan fogayna xabad ayaa la ladhacay Jigjigana waa laga saaray. Wajigii labaad ee halganka ONLF (1994-2018) ayaa xiligaas bilaabmay.
Tolow ma jawi noocaas ah ayaa inagu soo socda? ONLF maxaa meeshan u yaal waa su’aalaha aan isweydiiyo.
Talo: ONLF ha foojignaato; ha ogaato in basaasnimo wey lagu hayo oo Jigjiga laga soo buuxiyey Maraja ama ciidamada dahsoon oo dhaqdhaqaaqa ONLF aad ula socota.
Waxa kale oo looga baahanyahay in ay u habr-wacato beelaha Soomaaliyeed ee dawlada Mustafa dagaalka Oromeysan ku hayso baaqna u dirto Barbaarta Sitti, Isbahaysiga Xooga Difaaca Moyaale iyo Tuleguuleed, wadahadal la furto xoogaga Soomaalinimada raba islamarkaana aan rabin in ay Addis maqaar saar u noqdaan. Ugu dambey, ONLF dagaal ayaa ku socda ee haka tabaabushaysato.
Daawo; Warkii ugu danbeeyay Xuduuda u dhaxaysa Eritariya iyo Itoobiya oo wali... Sirdoonka UK oo war kasoo saaray Carmaladda Cad oo lagu ogaa Soomaalia+Halkay...